बिहीबार, असोज ३०, २०७६
धुमपानले ढाड दुख्ने समस्या हुनसक्ने
धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। धुमपानले फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ। धुमपान निषेध।
यस्ता सूचनाहरू सार्वजनिक स्थल, रेस्टुरेन्ट, कार्यालय, क्लब आदिमा देख्नुभएकै होला। चुरोटका बट्टामै पनि यसबारे सावधान गराइएको हुन्छ। विद्यालयदेखि नै हामी सबैले धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकार हुन्छ र धुमपानबाट टाढै बस्नुपर्छ भनेर सिक्छौं। तर धुमपान गर्नेहरूको संख्या उल्लेखनीय छ।
अधिकांशले किशोरवय धुमपान गर्न सुरू गर्ने बताइन्छ। साथीभाइको लहलहैमा उनीहरूले धुमपान सिक्छन्। आमाबाबुले धुमपान गरेको देखेर पनि सन्तानलाई कस्तो हुन्छ भनेर कौतुहल हुनसक्छ। अथवा पर्दामा देखिने कुनै सेलेब्रिटीको नक्कल पनि गर्नसक्छन्।
कतिपय यसलाई चलनचल्ती वा फेसनको रूपमा पनि लिन्छन्। चालै नपाइ उनीहरूलाई यसको लतमा फस्छन्। धुमपान बढ्दै जान्छ। त्यसपछि उनीहरूले धुमपान गर्नुको कारण बदलिन्छ। उनीहरूलाई “चेन स्मोकर” पनि भनिन्छ। उनीहरू एकछिन पनि चुरोट नखाइ बस्न सक्दैनन्।
धुमपान किन गरेको भनेर सोधे तनाव कम गर्न, आनन्द र उर्जा पाउन वा सामाजिक मेलमिलापका लागि सेवन गरेको उनीहरू उत्तर दिन्छन्। चुरोटमा पाइने निकोटिन नै लत बसाल्ने प्राथमिक तत्त्व हो। त्यसैले एउटा चुरोट सेवन गरेपछि अर्को पनि खाउँ खाउँ लाग्छ। एकछिन नखाए उनीहरू चिन्तित, तनावग्रस्त हुन्छ। चिढचिढो हुन्छन् र जाँगर पनि हराउँछ। त्यसैले उनीहरू एकपछि अर्को चुरोट खान थाल्छन्।
सन् १९५० को दशकमा धुमपानका हानिबारे पहिलो अध्ययन प्रकाशित भएदेखि फोक्सोको रोग, मुटुरोग, पाठेघरको क्यान्सर, उच्च कोलेस्टेरोल र रगत जम्ने लगायतका थुप्रै समस्यालाई पनि धुमपानसँग जोडिएको छ। सबैलाई यसबारे थाहा पनि छ तर अन्य समस्याहरू पनि उत्तिकै हुन्छ, जस्तै ढाडको दुखाइ।
निरन्तर ढाड दुखिरहनेहरू बढि मात्रामा धुमपान गर्ने गरेको पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाएका छन्। लामो समयदेखि दुखाइबाट पीडितहरू डिप्रेसन वा चिन्ताका कारण धुमपान गर्ने गरेको अनुमान गरिएको छ। धुमपानले दुखाइ कम गर्ने उनीहरूको बुझाइ हुनसक्छ। तर यो गलत हो। धुमपानले रगत र “स्पाइनल डिस्क”मा अक्सिजन र महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरूको बहाव रोक्छ जसले कम्मर दुख्ने गर्छ।
धुमपानले जोर्नीको समस्या पनि बढाउँछ
धुमपान र कम्मरको दुखाइबीच सम्बन्ध भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। धुमपान, उच्चरक्तचाप लगायतका रोग कम्मरको दुखाइसँग सम्बन्धित छन्। मेरूदण्ड खिइँदै गएपछि कोलेस्टेरोलको मात्रा अत्यधिक बढ्ने गर्छ। कम्मर दुख्नुको यो अर्को कारण हो। धुमपानले नशाहरू कडा बनाउँछ जसले दुखाइ र मेरूदण्डको डिस्क खिइने हुनसक्छ। धुमपानले मष्तिष्कको दुखाइ सम्बन्धी “सर्किट” पनि प्रभावित हुने अर्को अध्ययनले देखाएको छ। यसले धुमपान गर्ने व्यक्तिको ढाड र कम्मर दुख्ने जोखिम बढ्छ। धुमपान गर्नेहरूलाई ढाडको “क्रोनिक” दुखाइ हुने सम्भावना तीन गुणा बढि हुने अध्ययनले देखाएको छ।
धुमपान त्यागेर स्वास्थ्यालाभ
हो सजिलो छैन तर असम्भव पनि होइन। धुमपान त्याग्ने थुप्रै उपायहरू छन्। एक्कासी धुमपान बन्द गर्दा शरिरमा नकारात्मक प्रभाव हुनसक्ने भएकाले क्रमिक रूपमा पनि धुमपान घटाउन सकिन्छ। यसका लागि निकोटिन “रिप्लेसमेन्ट” उत्पादन प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै निकोटिन गम, प्याच। यसका लागि डाक्टरको सल्लाह लिए अझ सहयोग पुग्नेछ। सुर्तिको स्मरण गराउने सबै कुरा तत्कालै त्याग्नुपर्छ जस्तै चुरोट, लाइटर, एश्ट्रे आदि। परिवार र साथीभाइको सहयोग लिनुहोस्। चुनौतीका लागि तयार रहनुहोस् र नियमित व्यायाम गर्नुहोस्।
लगेभिटि लाइभ डट कम
Published Date: Sunday, 6th October 07:04:17 AM
आफ्नो कामबाट कसरी सन्तुष्ट हुने…
आइसल्यान्डमा ग्लेसियरको सम्झनामा स्मारिका
पैसाभन्दा शारीरिक व्यायामले दिन्छ धेरै…
क्रिस्चियानो रोनाल्डोको ७०० औं गोल
तपाई कति रिसाउनु हुन्छ ? रिस मानिसको शक्तिशाली उत्प्रेरक बन्न सक्छ
एम्स्टरड्यामलाई कारमुक्त सहर बनाउने
मानिस बुढेसकालमा किन कम बोल्छन्?
स्वामी शिवानन्द विश्वकै पाका पुरूष !
नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री किन साइकल चढ्छन्?
परम्परा र जातका कारण एसियाका महिलाले जमिनको अधिकार पाएनन्
पुटिनराजमा मद्यपानमा ४० प्रतिशत कटौती
सिङ्गल‑युज प्लास्टिकको साटो दुना‑टपरी प्रयोग गरे के हुन्छ?
विश्वकै बहुमूल्य “स्टार्ट अप” विवर्ककाे कथा
मोबाइल फोनको लत घटाउने 'गो ग्रे' उपाय
अबको २९ वर्षपछि मानिसले गर्ने सबै काम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्ने